प्राचीन समयमा, जो बच्चा अभिषेक नाम केही मूल्य थियो। यसरी आमाबाबुले तिनीहरूले भविष्यमा बच्चालाई हेर्न चाहनुहुन्छ कसरी देखाइएको छ, के गुण उहाँलाई सिकाउन इच्छुक छन्। र जसको मूल पूर्व-मसीही पटक फिर्ता तिथिहरु, गरौं बच्चालाई मालिक साहस र बल जोड संभावना छ अलेक्जेन्डर, को नाम। यो नाम कसरी उत्पत्ति गरे र यसलाई आफ्नो मालिक को भाग्य र चरित्र कसरी असर गर्छ?
नाम अलेक्जेन्डर को मूल
पहिले नै उल्लेख रूपमा, यो नाम ख्रीष्टियन अघि देखा पर्नुभयो र ग्रीक जरा छ छ। यो दुई शब्द बाट, बरु दुई विलय द्वारा भयो ग्रीक नाम: "रक्षा" गर्न अनुवाद जो Alexeo, र Andres - "मानिस", "पति"। यसरी, अलेक्जेन्डर, को मूल को नाम हामी रूपमा शाब्दिक अनुवाद विश्लेषण जो "रक्षक।" दुर्भाग्यवश, दुई नाम को एक विलय भयो कसरी विश्वसनीय स्रोतबाट संरक्षित छैन। तर यो गरेको थियो संस्करण क्रममा एक आफ्नो मूल्य र अर्थ बृद्धि गर्न।
अलेक्जेन्डर नाम: मान, मूल, ठूलो मान्छे
शायद इतिहासमा यो नाम संग सबै भन्दा प्रतिष्ठित आंकडा - छ Aleksandr Makedonsky, थियो ठूलो सामान्य र विजेता। रूस मा, नाम मसीहीधर्म फैलाउने संग देखियो। सुरुमा, तथाकथित माथिल्लो कक्षाहरु, गभर्नर र अगुवाहरू प्रतिनिधिको। अलेक्जेन्डर Nevsky canonized थियो, यो नाम साधारण मान्छे लोकप्रिय भयो। इतिहासको अर्को महत्त्वपूर्ण आंकडा अलेक्जेन्डर Suvorov छ। यो मानिस एक युद्धमा गुमाउनु भएन। साथै, विभिन्न समयमा देश शासन गर्ने तीन रूसी सम्राट्, यो नाम लगे। निस्सन्देह, यो थप यसको लोकप्रियता वृद्धि र प्रसार गर्न योगदान गर्नेछ। र यो दिन यो सबैभन्दा लोकप्रिय नाम को एक धेरै देशहरूमा, रूस मा सहित रहनेछ। त्यसैले के अलेक्जेन्डर, जो को मूल को नाम, हामी देख्न रूपमा, धेरै अस्पष्ट छ?
एक बच्चाको रूपमा, Alexandra अक्सर बिरामी, तर अभ्यास र बलियो र स्वस्थ बन्न आदी एक वयस्क, रूपमा। यसरी धेरै एकल-दिमाग, उत्सुक नाम मानिस, निर्धारित। उहाँले राम्ररी विकास कल्पना र स्मृति छ। नाम को अर्थ, नियम, यसको मालिक को वर्ण गर्न पत्राचार: उहाँले प्राप्त लक्ष्य, बस, ठूलो साहस संग endowed मा बेलेम छ। अलेक्जेन्डर मत आफूलाई नियन्त्रण गुमाउन सक्छ रक्सी को लागि एक कमजोरी, छ। यो नामको मान्छे सायद, किन यति ठूलो कमान्डरहरु को तिनीहरूलाई धेरै छ, संगठनात्मक कौशल र नेतृत्व गुण अधिकार। मानिस, महिला हेरचाह र तिनीहरूलाई राम्रो छाप बनाउन यसरी सक्षम नाम। तर सबै को सबै भन्दा यसलाई Tamara नाम माया, नतालिया वेरा, मरियम ओक्साना, आशा संग निष्पक्ष सेक्स अनुकूल।
अलेक्जेन्डर नाम: ज्योतिष मा मूल र महत्त्व
स्याटर्न - यो नाम भन्दा मनसायलाई राशिफल धनु, आफ्नो संरक्षक ग्रह मेल खाने विश्वास गरिन्छ। हरियो र रातो - रंग अलेक्जेन्डर गर्न भाग्य ल्याउन। एउटै नामको व्यक्ति को लागि एक राम्रो जन्तरको यस्तै नामको एक पत्थर हुनेछ - अलेक्जेन्डर।
उनको प्रतिद्वन्द्वी को प्लट - परिवारको मुक्तिको
यो सत्य हो कि मशरूम को धेरै - खराब Omen (युद्ध को लागि)? मशरूम बारेमा लोक omens
जीवनी Vanga - ठूलो भविष्यवक्ता भनेर
दबाइ "Iodinol" नङ च्याउ बाट: डाक्टर को समीक्षा
"Grammidin": प्रयोगको लागि निर्देशन
सटीक कविता के हो? सटीक कविता: उदाहरणहरू
उल्टाउने तालिका - यो के हो र तपाईं यसलाई किन आवश्यक
बच्चाहरु र वयस्क लागि जहाज मा सुरक्षा नियम
Geydara Alieva केन्द्र - विश्व मा सबै भन्दा राम्रो भवन